Dangkhabar – दाङ खबर
Apr242019 by DangkhabarNo Comments
डडेल्धुरा, वैशाख ११ । धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक आज बिहान ५:३० बजे दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा खाद्य सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरु बढी हुनु तथा यात्रु पनि क्षमताभन्दा बढी भएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय सर्वसाधारण खटिएका छन् । घाइते कति छन् भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।
Apr232019 by DangkhabarNo Comments
काठमाडौं ,बैशाख १०। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–३ साबिकको फुजेल गाविसमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।बिजुलीको पोलमा काम गर्न जाँदा स्थानीय चमतीका अन्दाजी ३५ वर्षीय भुवन अधिकारीको बिहान ८ः३० बजे करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । बिजुलीको पोलमा काम गर्न जाँदा प्राधिकरणसँग सल्लाह गरेर गएको स्थानीय धुव्र दुवाडीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको लापरबाहीको कारण भुवनको मृत्यु भएको हो ।’ अहिले पनि उनको शव बिजुलीको तारमा झुन्डिएको अवस्थामा रहेको उनले बताए । घटनाबारे प्रहरीलाई खबर गरिएको छ ।भुवन गाउँमा केही वर्षदेखि बिजुलीको काम गर्दै आएका थिए ।
रीना बस्नेत मृत्यु प्रकरण- कथित प्रेमी पक्राउ, प्रदर्शन जारी
मोरङ,बैशाख १०– पथरीश निश्चरे नगरपालिकामा गत शुक्रबार २९ वर्षीया रीना बस्नेतको मृत्यु को सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको अनुसन्धान चलिरहेको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले सो घटना प्रायोजित रुपमा हत्या वा मृत्यु के हो त्यसको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएका छन्। प्रहरीले अहिले नै घटनाबारे प्रष्ट खुलाएको छैन। घटना भएको तेश्रो दिन सोमबार पथरीबजारमा स्थानीयले विरोध गरेसँगै प्रहरीले सोधपुछका लागि एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। एसपी केसीले भने, ‘हाल मृतक बस्नेतसँग निकट भएर गफ गर्ने एक व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिरहेका छौँ। सोही क्रममा सोमबार हामीले स्थानीय कोमल नेपाललाई पक्राउ गरेका छौँ।’घटनापूर्व नेपालसँग मृतक बस्नेतको पटक/पटक फोनमा कुराकानी भएको र आउजाउ हुने गरेको कारण प्रहरीले नेपाललाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। ‘प्रहरीले ती व्यक्तिसँग सोधपुछ र अनुसन्धान गरिरहेक
भारतमा तेस्रो चरणको चुनाव-भोट हाल्नुअघि मोदीले लिए आमाको आशीर्वाद
काठमाडौं,वैशाख १० । भारतमा लोकसभाको तेस्रो चरणको मतदान सुरु भएको छ । भोट हाल्न जानुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आमाको आशीर्वाद लिएका छन् ।भारतका १३ राज्य र दुई केन्द्र शासित प्रदेशका ११६ लोकसभा सिटका लागि आज मतदान भइरहेको छ । सात चरणका मतदानमध्ये तेस्रो चरणको यो चुनावलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी, जया प्रदा र आजम खानसहितका ठूला नेताहरुको भविष्य यही चुनावले निर्धारण गर्ने छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गुजरात पुगेर आज मतदान गरेका छन् । मतदान गर्न जानुअघि उनले आमा हिराबेनको आशीर्वाद लिएका थिए । उनले आमालाई भेटेर पाउ ढोगे । अनि सल उपहार दिएर मिठाइ खुवाए । यसैक्रममा आमा हिराबेनले पनि मोदीलाई निधारमा रातो टीका लगाइदिइन् र मिठाइ खुवाइन् । भोट हाल्न जानुअघि मोदीले आमासँग भेटेको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ ।सन् २०१४ को लोक
गोरखा वैशाख १० । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका दुई कार्यकर्तालाई गोरखाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखा जिल्लाका जनपरिषद् प्रमुख विष्णु रिजाल र विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पाण्डे रहेका छन् । प्रहरीले जनपरिषद् प्रमुख रिजाललाई सोमबार जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका–७ घ्याल्चोकबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेका रिजाललाई राजद्रोहअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी भोला रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पक्राउ परेका विद्यार्थी नेता पाण्डेलाई धादिङको एनसेल टावरमा क्षति पु¥याएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धानका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । पाण्डेलाई आइतबार जिल्लाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–६ अश्राङबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विराटनगर ,बैशाख १०। विराटनगरमा तीन जना लुटेराले सादा पोशाकका प्रहरी भन्दै झुक्याएर लुटपाट गरेका छन् ।लुटेराहरुले गएराती १२ बजे विराटनगर ८ स्वागतम् टोलका सिंहेश्वर यादवको घरमा रु ६५ हजार नगद लुटेका हुन् । को ३७ प ४४७२ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका तीनजनामध्ये दुईजना रु ६५ हजार लिएर खेत तर्फ भागेको स्थानीयले बताएका छन् ।मोटरसाइकल चलाउने मोरङ जहदा ६ का सिमान्त करदार मण्डललाई भने स्थानीयले घेरेर पक्राउ गरेका थिए ।मण्डललाई वडा प्रहरी कार्यालय हाटखोलाबाट गएको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले साथीहरुले रु २० हजार मात्रै लुटेको प्रहरीलाई बताएका छन् ।प्रहरीका अनुसार, फरार दुई मध्ये एक पेशेबर लुटेरा भएको खुलेको छ ।उनीहरुको खोजीका लागि राति देखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएका ेछ ।
विवाहको पाँच दिनमै पति वियोग !
पोखरा, बैशाख १०। कास्कीमा एक नवविवाहिता विवाहको पाँच दिनमा नै पति वियोगमा परेकी छन् ।कास्कीको पोखरा–७ मासबार निवासी सिर्जना राउतले विवाहको खुसी साट्न नपाउँदै पति गुमाएकी हुन् । उनको पाँच दिनअघि पोखरा–३३ का सन्दीप कुँवरसँग विवाह भएको थियो । सोमबार म्याग्दे–१ गुणादीमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी कुँवरको निधन भएको हो । मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी सिर्जना घाइते भएकी छन् । उनको खुट्टा भाँचिएको छ । उनको मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरु सवार मोटरसाइकल यात्रु बसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Apr222019 by DangkhabarNo Comments
श्रीलंकामा फेसबुक बन्द
एजेन्सी बैशाख ९- श्रीलंकामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ। आइतबार भएको बम विस्‍फोटमा परी दुई सय ७ जनाको मृत्यु भएको थियो। हिंसात्मक गतिविधि नहोस भनेर तत्कालको लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको श्रीलंका सरकारले घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट उदय आर सेनेविरानेले भने,'सरकारले अस्थायीरूपमा तत्कालको लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम उठाएको छ।' होटल र चर्चमा गरेर चार सय ५० जना घाइते भएका छन्। फेसबुकका प्रवक्ताअनुसार सरकारलाई सचेत गराउनको लागि र सरकारको आग्रहमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले अगाडि थपे, फेसबुक मार्फत हिंसालाई बढावा दिने खालको सन्देश आदानप्रदान हुने भएकोले पनि यस्तो कार्य गर्नुपरेको हो।' स्थानीयका अनुसार स्थानीय समय अनुसार दुई बजेदेखि सामाजिक सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका थिए।तर, टवीटर भने सञ्चालनमा थियो।
वैशाख १६ बाट बजेट अधिवेशन
काठमाडौँ, वैशाख ९ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १६ बाट आह्वान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १६ गते दिउँसो ४ बजे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई आइतबार पठाएको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिनापछि अधिवेशन आह्वान भएको हो । चैत ११ गते संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले सचिवालयलाई अधिवेशन आह्वानको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। गौतमले भन्नुभयो ‘अधिवेशन आह्वानको पत्र प्राप्त भएको छ । २०७६ वैशाख १६ गते ४ बजे अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्नेछ।’ बजेट अधिवेशन समेत भनेर चिनिने बर्खे अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट समेत पेस गर्नेछ । हाल कत
रामेछापमा तारा एयरको जहाज दुर्घटना
काठमाडौं, बैशाख ९ - सोलखुम्बुको लुक्लाबाट रामेछाप आएको तारा एयरको ९ एन एकेके कल साइनको जहाज मन्थली विमानस्थलमा धावनमार्ग (रनवे)बाट चिप्लिएको हो। अवतरण गर्ने क्रममा टायर पन्चड भएर जहाज रनवेबाट चिप्लिएको हो।चिप्लिने क्रममा जहाजले मनाङ एयरको हेलिकोप्टरलाई ठक्कर दिएको थियो। तर मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ।